The Lockheed C-130 Hercules agha iga ugbo elu mere site na United States ná ngwụsị afọ ndị 1950s. O zutere a dị ịrịba ama ihe ịga nke ọma na n'elu 2200 nkeji wuru iri ise ọrụ mba, na na ọtụtụ-eji 2007. (Source Wikipedia)
Odi mma add-on na ihe niile ịchọrọ ife na Flight Simulator, ọtụtụ ụdị elele na kokpiiti mebere, a na-edozi ụlọ ahụ dum na 3D.
Ọtọ na ezi uche ugbo elu na-ekwe omume iji dobe para agha.
Pịa i idebe paratroopers.
Echefukwala na-agụ akwụkwọ
Loading ramp - Tailhook akara
Ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ - ịgbanwee E
Wipers - Concorde imi-ewelite ma na ala (M atụ aro ka ị na-eji W na Mgbanwe W)
Kokpiiti echiche; Num na mpe mpe akwa - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
Ụlọ + nku echiche; Ctrl + Num-mpe mpe akwa - 1, 2, 3, 7, 8, 9
Ini ekededi Na-ele na-ahụ anya ọdịda ọkụ na-enwu n'ime kokpiiti; Ctrl + Num-mpe mpe akwa - 8 (-atụ anya Up)
Onye edemede: SIMSHED, Claus Vendelboe Holmberg